Amanyathelo ama-8 okuthengisa kwiKhaya lakho
EyoKwindla 18, 2020 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Ukuba ukulungele ukuthengisa indlu yakho kodwa awuzange udlule kwinkqubo, awunakuqiniseka ukuba ungaqala ngaphi - la manyathelo asibhozo azakuqinisekisa ukuphumelela.
Fumanisa ukuba lingakanani na ikhaya lakho
Inyathelo lokuqala kukubuza, “Yimalini indlu yam?? ” Ukuba impendulo ayisiyiyo le ubuyithembile, yenza konke onokukwenza ukwandisa ixabiso ngokwenza uphuculo. Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lwakho luqinile, ubuncinci qwalasela ukulungisa, ukuhombisa imbonakalo yomhlaba wakho, ukuphelisa ukungcola kwaye kuyicoca ngokucokisekileyo.
Chonga elona xesha lilungileyo lokuThengisa
Ukuba ufuna ezona ziphumo zilungileyo, unokungafuni ukubeka ikhaya lakho ekuthengiseni ngexesha lasebusika. Iinyanga zehlobo zibona ezona ntengiso zekhaya, nangona naliphi na ixesha phakathi kuka-Epreli ukuya ku-Okthobha zingakunceda wandise inzuzo.
Fumana iarhente elungileyo yearhente yokuthengisa izindlu
Ukuba ne-realtor enamava ecaleni kwakho yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwinkqubo yokuthengisa ekhaya. Ukuba kunokwenzeka, zithunyelwe ngabahlobo, izalamane, abamelwane okanye osebenza nabo. Udliwanondlebe ubuncinci ubuncinci ezintathu ukufumanisa i-rapport kunye nokubuza imibuzo efana nokuba liza kuba yintoni icebo learhente. Kuya kufuneka abe namava okuthengisa amakhaya kwindawo ohlala kuyo ukuba kunokwenzeka. Uya kufuna kwakhona ukukhangela izinga lokuyalelwa kwekhomishini kuya kufuneka uhlawulele iinkonzo ezithengiweyo. Ngelixa unokuhamba nge-FBSO (Kuthengiswa ngumnini), ngaphakathi iimeko ezininzi uya kuthi ekugqibeleni ufumane elincinci ikhaya lakho ekugqibeleni kunokuba uqeshe iarhente kwaye uhlawule imirhumo yekomishini.
Yenza Ukulungiswa okuyimfuneko
Jonga ikhaya lakho, ngaphakathi nangaphandle, ngamehlo ononophelo omthengi onokuchonga naziphi na iingxaki ezinokubakho. Ufumana kuphela ithuba elinye lokwenza umbono wokuqala wokuqala ukuze uqiniseke ukuba ulungisa konke ngokufanelekileyo. Nantoni na enkulu iza kubuya ikuchithe xa uhlola.
Ufuna ukuba ikhaya lakho likhangeleke njengeyona nto intle, ayithethi kubathengi kuphela kodwa yeefoto. Inike ukucoca okunzulu okanye ukuqesha inkonzo yokucoca-yonke into ifanele ikhanye. Oko kuthetha ukuba imigangatho, iikhaphethi, udonga, yonke into. Ingaphakathi kufuneka likhanyise kakuhle, ukuba kukho imfuneko, yongeza izibane kwaye uqiniseke ukuba ugcina amehlo evulekile ukuzisa ukukhanya kwendalo. Ukucekisa onke amagumbi (kubandakanya amagumbi) kuyakwenza ukuba ibonakale icocekile kwaye ibanzi.
Ucingela ukuba uqeshe iarhente enobuchule, loo mntu uya kuchonga iindawo zokuthengisa eziphambili zekhaya lakho kwaye ukhethe eyona ndlela intle yokubhengeza. Dibana kunye nommeli wakho ukuze uncede kwaye wamkele iphulo-emva kwayo yonke into, uhlala ekhaya, ke uyazi ngcono kunaye nabani na. Iifoto zobungcali kufuneka zithathwe ubuncinci-ukhenketho olubonakalayo lunokuzisa abathengi abanokubakho.
Enye yezona zinto zomngeni zokuthengisa ekhaya kukubonisa ikhaya. Ukuba unyanzelisa iarhente yakho ukuba yenze ixesha lokudibana, uya kuba nabathengi abambalwa abangena ngomnyango. Ndizame nokuba bhetyebhetye kangangoko kunokwenzeka okanye vumela iarhente ifake iphedi yamaqhosha okanye ibhokisi yokutshixa ukuze ikubonise ngelixa ungekho. Okukhona uhlala ngakumbi, kokukhona kungcono.
Xoxa okanye wamkele unikelo
Xa ufumana isipho, wena nearhente yakho banokuthatha isigqibo sokwamkela okanye ukubonisana apho. Ukuba ikhaya lakho linamalungelo amaxabiso, unokufumana okuninzi, kodwa ungazihoyi, nokuba zibonakala ziphantsi. Amaxesha amaninzi abathengi baqala phantsi kodwa bazimisele ukuxoxa. Nje ukuba wonke umntu avumelane inkqubo yokuthengisa inokugqitywa. Ukuvala, amaphepha okugqibela aya kutyikitywa, uya kufumana isheke kwaye umthengi uya kufumana izitshixo.
okwenyaniWW Matshi 18, 2020
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho ukuthengisa ikhaya lakho. Bookmark le Permalink.
Julayi 5, 2017 How to Make Your Real Estate More Appealing to Buyers You're entering a competitive marketplace when deciding to sell your real estate. The competition is huge over there. You will see plenty of real estates that offer similar or even better features. That's why it is important to set your property apart from the rest. Read on to find out how to make your real estate more attractive and appealing to buyers. Fix the little things in and around your house Overlook all the things, especially the "little" things, to see if something needs […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya